Wafdi DF ka socda oo kormeeray deegaanno uu saameeyay fatahaadda Webiga Jubba.
Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa booqday deegaanno hoostaga degmada Baardheere ee Gobolka Gedo oo uu saameeyay fatahaadda Webiga Jubba.
Wafdi uu hoggaaminayo Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Xukuumadda Soomaaliya Axmed Cismaan Ibraahim ayna wehliyaan xubno ka socda Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa u kuur galaya xaaladda dadka ay saameeyeen Fatahaadda Webiga Jubba.
​ Max’ed Xuseen Cismaan Madaxa Mashaariicda Maamulka degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa sheegay in Masuuliyiintu ay soo indha indheeyeen xaaladda dadka saameynta uu ku yeeshay fatahaadda Webiga isagoo tilmaamay in ay soo dirtay wafdigani Xukuumadda Soomaaliya. Si kastaba dad badan oo degan deegaanada ku dhow dhow webiga Jubba ayaa waxaa saameeyay fatahaadda Webiga Jubba kadib markii uu cagta mariyay dalag beereedyadoodii ay ku tiirsaneed noloshooda.
Daawo sawirada: wararkii xalay lugu qaday magalada paris oo ku dhinteen in ka badan 120 ruuux wareerkas iskugu jiray qarax iyo toogasho.
120 ruux ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen weeraro qaraxyo iyo toogasho xalay ka dhacday magaalada Paris ee Caasimada dalka Faransiiska, iyadoo weerarkan uu ahaa kii ugu xumaa abid soo mara dalkaas.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa xilliga weerarada dhacayeen daawanayay ciyaar kubada cagta ah oo dhex mareysay xulalka France iyo Germany, oo ka dhaceysay garoonka Stade De France, iyadoo weerarka kadibna laga saaray goobta.
Ku dhowaad boqol ruux ayaa ku dhimatay Tiyaatarka Bataclan, halkaasoo kumanaan ruux ay ku daawanayeen Koox Fanaaniin Mareykan ah oo bandhig heeso ku qabanayay Tiyaatarka, waxaana halkaas ka dhacay toogasho, dad badan ayaa markii rasaasta bilaabatay ka cararay goobta.
Waxaa la rumeysan yahay in weerar is qarxin ah uu ka dhacay banaanka garoonka kubada cagta ee Stade de France, sidoo kale waxaa la soo warinayaa in ugu yaraan 80 ruux ay ku dhinteen masrixiyada Bataclan oo ku taal bartamaha magaalada Paris. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah, isagoo amray in la xiro dhamaan xuduudaha dalka Faransiiska, waxaana durbaba soo baxaya cambaareyn madaxda Caalamka u jeedinayaan weerarkaas. Ilaa dhowr goobood oo maqaaxi ay ku jiraan ayay weerarada ka dhaceen, waxaana laga cabsi qabaa in khasaaraha dhimashada uu intaan ka bato.
Dableyda hubeysan ayaa afduub ahaan u qabsaday dad lagu qiyaasay illaa lixdan ruux, waxaana ciidamada booliska ay ku dhaqaaqeen howl gal ay si deg deg ah u soo afjareen, kuna dileen dableydii weerarka geysatay. Booliska ayaa sheegaya in illaa sideed nin hubeysan ay ka dambeeyeen weerarada, shan ka mid ah ayaa la sheegay inay is qarxiyeen, halka saddex kalena ay toogteen ciidamada booliska.
​ In ka badan 1,500 askari ayaa loo daad-gureeyay goobaha ay weerarada ka dhaceen ee magaalada Paris, si ay uga qeyb qaataan howlaha gurmadka iyo sugida ammaanka. Ma jirto cid sheegatay weerarkan, hase ahaatee Faransiiska ayaa sanadkan u ah sanad madow, kadib markii horaantii sanadkan weerar lagu qaaday Wargeyska Charlie Hebdo iyo goob laga dukaameysto oo ku taal magaalada Paris, halkaasoo lagu dilay illaa 17 ruux.
GOLAHA Baarlamaank somaliya oo shalay ka hur istagay qaraar ka dhan ah Darbiga Kenya ka dhiseyso Xuduuda.
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ka doodaya qaraar ku aadan xagudubka Kenya ay sameysay xuduuda, gaar ahaan ay ka dhiseyso xuduuda ay la wadaagto Soomaaliya.
Guddiyada Arrimaha Dibadda iyo Arrimaha Gudaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo diyaariyay qaraarkan maanta la horgeynayo Baarlamaanka. Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa go’aan cad ka qaadan doona qaraarkan ku saabsan darbiga ay Kenya ka dhiseyso xuduuda, iyagoo si adag uga fal celin doona wararka sheegaya in Kenya ay bur burisay dhamaan calaamadihii xuduuda muujinayay ee ku yaallay dhanka degmada Beled-xaawo ee Gobolka Gedo.
Hab-dhowraha Baarlamaanka Xildhibaan Maxamed Cumar ayaa sheegay in kulanka maanta uu yahay mid ka duwan kulamadii hore, isla markaana Xildhibaanada dood kulul ka yeelan doonaan darbiga Kenya rabto inay ka dhisto xuduuda. “Maanta oo taariikhdu tahay 14 November oo maalin sabti ah, waxaa jira kulanka Baarlamaanka, waxaana dood adag oo aad kulul laga yeelanayaa darbiga kenya, waxaa la horkeenayaa Baarlamaanka qaraar ku saabsan arrintaas oo ay soo diyaariyeen Guddiyada Arrimaha Dibadda, Arrimaha Gudaha iyo Amniga”ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar.
​ Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa maalmihii u dambeeyay si aad ah uga qeyla-dhaamiyay, kana dhiidhiyay darbiga ay kenya ka dhiseyso xuduuda oo la sheegay inay ku soo durugtay xuduuda, isla markaana dadka ku nool Gedo ay arrintan walaac ka muujiyeen.
Dowlada Galmudug ayaa soo saartay amar ku wajahan isbaarooyinka yaala magalada galkacyo.
Golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Galmudug oo shir ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka wada hadlay xaaladda amniga ee deegaanada Galmudug. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay sidii loo qaadi lahaa isbaarooyin ka yaala deegaanada Galmudug.
Wasiirka amniga ee Galmudug Cusmaan Ciise Nuur oo kulanka kadib saxaafada la hadlay ayaa sheegay in lagu go’aansaday kulanka inay mamnuuc tahay isbaarada. Kulanka ayaa waxaa laga soo saaray amaro ku wajahan isbaarooyinka oo ay ka mid yihiin. In isbaaradu tahay sharci darro, qofkii dhigta uu yahay dembiile, hubka iyo gaadiidka loo adeegsado isbaarada in lala wareegi doono iyo qoddobo kale.
​ Wasiirka ayaa dhinaca kale sheegay in qubarro Shiinees ah ay ku sugan yihiin Galmudug kuwaasoo dayactir ku sameyn doona dekedda Hobyo.